Posted by 2mar at 7:16 PM No comments:
သြဂုတ်လ ၁၄ရက် ၈နှစ်ပြည့်အမှတ်တရ "ထူးအိမ်သင်"
ထူးအိမ်သင်သီချင်းတွေကို စာသားတွေတစ်စိမ့်စိမ့်နားထောင်တယ် သံစဉ်တွေ စိတ်နဲ့ခံစားနားထောင်တယ် အကြိုက်ဆုံးသီချင်းကိုပြောပြပါဆိုရင်တော့ ဖြေစရာမရှိဘူး အကုန်လုံး နားထောင်တိုင်း အနှစ်သာရတစ်ခု ခံစားမှုတစ်ခုရသလိုပဲမို့ပါ...
သီချင်းတွေ နားထောင်ရတာမက်မက်မောမောမရှိပေမယ့် ထူးအိမ်သင်သီချင်းတွေကိုတော့ မက်မက်မောမောကြိုက်ပါသည်။
နှမြောပါသည်။ အသစ်တွေ ဘယ်တော့မှ နားထောင်ခွင့်မရနိုင်တော့လို့ သြဂုတ်လ ၁၄ရက်ကိုတော့မှတ်မိနေတယ်။ ဘာလို့ထူးအိမ်သင် သီချင်းတွေကြိုက်တာလဲလို့
အူကြောင်ကြောင်မေးခွန်းမေးသူများလည်းရှိပါရဲ့အဖြေက ရှင်းပါတယ်။ ပြန်ဖြေစရာကို အဖြေမရှိတာပါ။
နွားကိုပလာတာကျွေးလို့ ကောင်းတယ်ပြောမှာမှ မဟုတ်တာလို့စိတ်ထဲကပဲဖြေလိုက်တယ်။ အဲလောက်ပါပဲ
ချစ်ခြင်းအားဖြင့် သီချင်းတွေကိုသီဆိုသွားလေသူသို့ လေးစားသတိရလျှက် ..... အမှတ်တရ...
သီချင်းများစွာမှ တချို့သီချင်းလေးတွေ ခံစားရတဲ့ စာသားလေးတွေ.... အမှတ်တရတင်ထားလိုက်ပါတယ်............
"အချိန်တွေ နာရီတွေရယ် ချုပ်နှောင်ထား
လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့ လမ်းပြ အလင်းကိုရှာ ဒီခရီးအဆုံးကိုမသိပါ ငါဟာမိုက်မဲနေမလား
အချစ်နဲ့ အမုန်းအားလုံးအမှတ်မဲ့ဖြတ်အလာ.. အနှစ်မဲ့ဘဝက အမှားအယွင်းများစွာ
ပုံသဏ္ဍာန်ဆိုလည်းမတည်မြဲတဲ့အရာ ငှက်တို့လို အစွမ်းလည်းမရှိ....
အမှန်တရားအတွက် ကာကွယ်အမှားအယွင်းတွေကို တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အခါ မင်းအသက်နဲ့ ဘဝကိုစွန့်လွှတ်ထားနိုင်မှ
ယုံကြည်ပါအမှန်တရား အရိုးသားဆုံးလှုပ်ရှား အကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေပေးဆပ်နိုင်မှ ...မင်းချစ်တဲ့ လောကကြီး
သာယာဖို့ ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်ပေါ့ကွာ
"အားလုံးစွန့်လွှတ်ခဲ့ ချစ်တဲ့ဒီသီချင်းအတွက် ဒါဏ်ရာတွေတွေ့လည်း ဘဝနဲ့ ငါလဲခဲ့ ဒါဟာအမှတ်တရဒါဏ်ရာ"
=>"ထူးအိမ်သင် - စိတ်ဓာတ်ကင်ဆာ"
"အချိန်ရယ်နေရာရယ် အရောင်ပြောင်းတဲ့တရား... စဉ်းလဲမှုများအလယ် ဖြူစင်စိတ်ကလေးထားရှိနိုင်မလား.....
ဆုံးရှုံးတဲ့အခါ တို့ရင်မှာ ရှင်းသန့်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား
ဆုံးရှုံးတဲ့အခါ တို့ရင်မှာ ပျော်နိုင်အုံးမလား ရက်စက်တတ်တဲ့ စိတ်ကခိုင်မာ
မှန်တယ်ထင်တာအကုန်လုံးပဲမှား ရက်စက်မှုများအလယ် ကြင်နာစိတ်ကလေးထားရှိနိုင်မလား...စိတ်ဓာတ်များရဲ့အင်အား
အိုး တဖြည်းဖြည်းနည်းသွားပြီလား သွေးကြောများထဲအနှံ့ ညစ်ပတ်တဲ့စိတ်က စီးဝင်လှုပ်ရှား ...
စိတ်ဓာတ်အတွင်းထဲ လှိုက်စား ...အဆိုးဆုံးပဲလွှတ်မြောက်လမ်း မမြင်ပါ
Posted by 2mar at 10:06 AM2comments:
Labels: သီချင်း, အမှတ်တရ
တစ်ပင်တိုင်မြနန်း အပင်ဖြစ်ပါတယ်။ အမြစ်ကို နေလှန်းပြုတ်သောက် လ္ဘက်ရည်အဖြစ်ခတ်သောက်ရင် ကင်ဆာလိုရောဂါတောင်သက်သာပျောက်ကင်းတယ်လို့သိရပါတယ်။ အပင်ရဲ့အရွက်က ခရမ်းရောင်အရင့်နဲ့နွယ်ပင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အလွယ်တကူစိုက်ပျိုးလို့ရပါတယ်။ ။ ကိုယ်တိုင်မမြင်ဘူးတာရယ် မြင်ဘူးချင်တဲ့သူတွေ ကြည့်ရအောင်တင်ပေးထားပါတယ်...
Posted by 2mar at 6:50 AM No comments:
Posted by 2mar at 4:22 AM No comments:
Labels: အကြိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံ, အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံ
ကျွန်မတို့ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူအဆအရတော့ ကလေးလိုချင်တဲ့သူတွေ သားဦးလေးမွေးချင်တဲ့သူတွေ လာပြီးဆုတောင်းရတဲ့နေရာလေးပါ ရွှေတိဂုံအံ့ဖွယ် နေရာများမှ တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ကဲ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ သားဆုပန်ကြည့်ကြရအောင်လို့ တင်ပေးထားပါတယ်။ မြတ်ဘုရား ရွှေတိဂုံ၏ အံ့ဖွယ် ၉ ပါး နှင့် သိမှတ်ဖွယ်ရာ အဖြာဖြာ ကိုလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကလင့်လေးမှာရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Posted by 2mar at 3:22 AM No comments:
Labels: Knowledge Share, ဘုရားစေတီဓာတ်ပုံ
စုရဲ့ဆုတွေ ရသလောက် စုပေးထားတယ်
Posted by 2mar at 1:43 AM No comments:
မနေ့ကမနက် ကို့ကို လေယာဉ်ကွင်းပို့ပြီးပြန်တော့ အိမ်မက်တွေမက်နေတာ အိပ်ယာကနိုးတော့ ရီလိုက်ရတာ ဗြဲ.. အော် ကျမ လည်းမိန်းမတော့ဆန်သေးတာကိုးလို့တွေးမိတယ်... အိမ်မက်ထဲမှာ ကိုက အသိအမျိုးသမှးတယောက်ကို လက်တော့အိတ်ပေးသတဲ့ ပေးတဲ့ အမျိုးသမီးက ကို အရင်ကကြိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်နေသတဲ့လေ...ဖြစ်ချင်တော့ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ အိတ်ထဲမှာ အဲဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သတ်ခဲ့တဲ့ ဟိုးအတိတ်ကစာတစောင်ပါသွားလေသတဲ့.. အဲစာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အဲအမျိုးသမီးလေးက ကို့ကို ပြန်ရောပါတယ်တဲ့လေ...
ကျမရှေ့မှာ မျက်စိနောက်အောင် (အိပ်မက်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပြောတာပါ) ဟိုးအရင်ကအကြောင်းတွေ ကို့အနားပဲကပ်ကပ်ပြီး ပြောပါသတဲ့ ကျမမသိတဲ့အကြောင်းတွေ ကျမမကြားအောင် ကျမရှေ့မှာ ထမင်းအတူစားကြရင်းပြောပါသတဲ့ အဲဒီမှာပဲ မြင်ပျင်းကပ်လှစွာရှိတာနဲ့ စားနေတဲ့ဇွန်းနဲ့ အဲအမျိုးသမီးခေါင်းကို ကျမခေါက်ပစ်ပြီး ထထွက်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့ရှင်.... ကျမချစ်သူကိုက ကျမကို ဆူလဲမဆူသလိုလိုက်လဲမချော့ပါဘူးတဲ့ ...အိပ်မက်လေးက ဒါပါပဲရှင် သားတော်မောင် အော်နေတာနဲ့ အိပ်ရာကလန့်နိုးလာတော့ ကျမဘေးမှာကို ရှိမနေတာသတိရလို့ သွားရပြန်ပါတော့တယ်.... အပြင်မှာအဲလိုသာဆို ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ မသိဘူးနော်...
Posted by 2mar at 12:14 PM No comments:
စိတ်ကူးထဲမှ ဖောင့်လေးတွေ အကုန်မပြီးသေးဘူး စိတ်ပါပေမယ့် မအားတာရယ် အားပေမယ့် စိတ်မပါတာရယ်ကြောင့် ခုထိတိုင်မပြီးသေးတဲ့ ကျမရဲ့ ချစ်စရာမြန်မာဖောင့်လေးတွေ မေ့သွားပျောက်သွားမှာစိုးလို့ အမှတ်တရ တင်ထားလိုက်ပါတယ်...
Posted by 2mar at 9:22 AM No comments:
ဒီပုံလေးနဲ့ ဂါရဝပြုပါတယ် အမေစု..
ဒီလိုပုံလေးတစ်ပုံ ရဖို့အတွက် တော်တော်ကြာခဲ့တယ်
မှတ်မှတ်ရရ ခြောက်လလောက်တောင်ရှိမလားပဲ ရန်ကုန်မီးကြောင့် Save မလုပ်မိလို့ ပြန်လုပ်ရတာ အခါခါ စိတ်တိုင်းအကျကြီးမဟုတ်ပေမယ့် 17.3.2012 ရက်နေ့ ဒီနေ့မှပဲ ကျေနပ်တဲ့ ပုံလေးတော့ရလာတယ် အမှတ်တရ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို တီရှပ်ပေါ်မှာရိုက်ပြီး မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်
ကြိုက်လို့ နှစ်သက်လို့ ယူသုံးချင်ရင်လည်းသုံးရအောင် ဘလော့မှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ...
Posted by 2mar at 11:26 AM No comments:
အမှတ်တရ အထက်မြန်မာပြည်ခရီး.... With My Sweet Family
သားလေးဇွဲဇွဲ ၄နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ မိသားစု နဲ့အတူ အထက်မြန်မာပြည်ဘုရားဖူးထွက်ဖြစ်တယ်။၂၁ရက်နေ့ ညနေ၄နာရီလောက်ရန်ကုန်ကနေစထွက်တော့ သားကဖျားနေတယ် နေမကောင်းပေမယ့်ဖြစ်အောင်ခရီးကိုစီစဉ်ခဲ့ရတယ်မန္တလေးမြို့ကိုည ၂နာရီလောက်ရောက်တော့ တည်းနေကြ ၈၁လမ်းက စိန်စိန်ဟိုတယ်မှာ တရေးလောက်အိပ်ကြတယ် မနက်၉နာရီလောက် မနက်စာစားပြီး စစ်ကိုင်း မင်းကွန်းကို စပြီးထွက်ခဲ့တယ် လမ်းတလျှောက် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ဝေ၀ါးဝါးနဲ့ ကြည့်ရတာ မရိုးနိုင်တဲ့ ရှုခင်းပါပဲ အမှတ်တရ မြစ်ကမ်းဘေးမှာ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးကိုနောက်ခံထားပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ
မင်းကွန်းလမ်းပြင်နေတာနဲ့ လမ်းသစ်ကနေသွားရတယ် အမြင်တစ်မျိုးနဲ့စစ်ကိုင်းချောင်ဇရပ်သွားလမ်းလေးတွေတွေ့ရတယ် မင်းကွန်းပုထိုးတော်ကြီးရောက်တော့ အတွေးတွေကများရတယ် ဒီဘုရားကြီးကို ဘာကြောင့် ထုနဲ့ထည်နဲ့ ဒီလောက် တောင် အကြီးကြီး တည်ထားရတာလည်း ပြီးတော့ ပြီးဆီးသွားရင် ဘယ်လိုဖြစ်မှာလည်း တွေးစရာပါပဲအလုအယက်ရှင်းပြကြတဲ့ကလေးတွေကတော့ မနားတမ်းပြောပြရင်း မုန့်ဖိုးရှာနေကြရှာတယ် နိုင်ငံခြားသားတွေတော်တော်များများကတော့ မန္တလေးကနေ သင်္ဘောနဲ့လာကြတာများတယ် အပင်တွေမှာ ကလေးတွေကို ပိုက်ဆံမပေးခြင်းဖြင့် စာရိတ္တမပျက်ပြားအောင်ကူညီကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံစာတွေ ကပ်ထားတယ်။ အင်း...ဒါလည်းလိုအပ်တာပဲ...လေ..မြသိန်းတန်ဘုရားပေါ်တက်ပြီးရှုခင်းတွေကြည့်ဘုရားဖူးပြန်ဆင်းလာတယ် ပန်းချီပြခန်းတွေတော့မကြည့်တော့ဘူး ကြည့်ရင် ဝယ်ချင်နေမှာလေ.. လိုချင်စရာတွေကြည့်ပဲကိုး.....မင်းကွန်းကပြန်တော့ ဥမင်သုံးဆယ်ဘုရားကိုရောက်တယ် နောက် ဆွမ်းဦးပုညရှင်စေတီတော်ကြီးရောက်တယ် အပြန် ကောင်းမှုတော် ဝင်တယ် ထုံးဖြူရောင်ကောင်းမှုတော် စေတီကြီးက ရွှေရောင်တွေအပုံလိုက်ချထားသလို နေရောင်မှာ လင်းလက်နေတယ် သနပ်ခါးတွေ မြန်မာ့ရိုးရာ ကစားစရာ ပစ်တိုင်းထောင်ရုပ်တွေ သံပတ္တလားလေးတွေ ဇီးကွက်ရုပ်တွေစောင်းတန်းမှာရောင်းနေတာတွေ့တော့ သားကကျကျနနထိုင်လို့ ပတ္တလားထိုင်တီးနေလေရဲ့.. ဒါနဲ့ပဲ ပတ္တလားဝယ်ခဲ့ရတယ် ...ပန်းဝါမြန်မာဘူဖေးဆိုင်မှာထမင်းစားပြီး အချိန်ရှိသေးတာနဲ့ အင်းဝကိုရောက်ခဲ့တယ် အင်းဝမြို့ရိုးကြီးက ခုထိ အုတ်ပုံတွေရှိနေတုန်းပဲ တစ်ချိန်ကဒီနေရာမှာ အင်းဝရွှေပြည်ဆိုတာ ရှိခဲ့တာ အခိုင်အမာပါလားလို့တွေးဖြစ်တယ် နှမြောလည်းနှမြောသလိုပဲ.... ခုတော့ရွာတရွာ မြို့နယ်တစ်ခုလောက်သာသာနဲ့ မြို့ရိုးကနေဝင်လိုက်ပြန်တော့ ငှက်ပျောပင်တွေ နွားတွေဖုန်းတွေ နဲ့ မြက်ပင်တွေ ကြီးစိုးလို့တချို့လည်း အိမ်တွေဘာတွေဆောက်ပြီးနေလို့ .... ဖုန်းတွေကြားထဲမှာအင်းဝရွှေပြည်ကြီးကြီးကို မှန်းတောင် မျှော်ကြည့်စရာမရှိတော့ပါလား.....နန်းမြင့်မျှော်စင် မယ်နုအုတ်ကျောင်း... ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်တယ် .. နောက်တနေရာကတော့ ဗားကရာကျွန်းတိုင်လုံးတွေနဲ့ကျောင်းကြီးရှိရာကိုရောက်ပြန်တယ်နိုင်ငံခြားသားတွေက မြင်းလှည်းတစ်စီး ၅၀ဝ၀နဲ့ ငှားပြီးလာကြတာ အများကြီးပဲတွေ့ရတယ်ကျောင်းပေါ်မှာ ကျွန်းပြားတွေက မပြုမပြင်နဲ့ သံတွေထိုးထွက်နေပြီ ပျဉ်တွေ ယိုင်နဲ့နေပြီ သတိမထားခဲ့မိလို့ ပျဉ်ချပ်ကျွံကျခဲ့တာကြောင့် ကျွန်းတိုင်လုံးကြီးအားပါးတရဖက်ထားခဲ့ရတဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်ကတော့အမှတ်တရပါပဲ.. နေရာတိုင်းမှာ နိုင်ငံခြားသားများကိုစောင့်ရှောက်ပါဆိုတဲ့ အပြာရောင်ဆိုင်းဘုတ်တွေကပ်ထားလေရဲ့နောက်ထပ် နေရာတနေရာကတော့ အမရပူရက ဦးပိန်တံတားပါပဲ ညနေဆောင်းနေပြီ နေဝင်နေပြီဆိုတော့ လူတွေစည်ကားနေတာပေါ့ဒီမှာလဲထုံးစံအတိုင်း မြန်မာလူမျိုးတောင်မနည်းရှာယူရမလိုပါပဲ ... တံတားပေါ်မှာလည်း လမ်းတောင်လျှောက်လို့မရအောင် များပြားလိုက်တဲ့လူတွေလှေစီးနေတဲ့သူတွေကစီးနေလေရဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လူတွေကလည်း ရှုထောင့်စုံကနေရိုက်နေကြတယ် ကိုယ်ကတော့ လူတွေများနေတဲ့ဦးပိန်ကြီးကို ဝတ်ကျေတန်းကျေပဲဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ် တစ်နေ့တာ အတွက်သွားခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်က ဒီနေရာမှာ အဆုံးသတ်ခဲ့တယ်... ညစာစားတော့ အတော်တောင်နောက်ကျနေခဲ့တယ်... အမှတ်တရ 22.1.2012
Posted by 2mar at 9:29 AM No comments:
Myanmar Font Information
Unicode User Guide from Myanmar IT Pro
Gift For Ur Friend
လာချင်တဲ့သူလာတာ ဝမ်းသာ နေနိုင်သလောက်နေတာတန်ဖိုးထား သွားရမယ်ဆိုလဲမပိတ်ပင်နဲ့
ကိုယ်တိုင် Slide လေးလုပ်မယ်
Happy 33 years Birthday (1)
အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံ (2)
သတိတရ သွားတတ်တဲ့ နေရာလေးများ
ကျနော်သိခဲ့သော ဇော်ဝင်းထွဋ် (Emperor) - *ကျနော်သိခဲ့သော ဇော်ဝင်းထွဋ် (Emperor)* အပိုင်း (၁) ကျနော့်ရဲ့ အမှတ်တရတွေ သီချင်းတွေရူးသွပ်ခဲ့တာတွေ မူရင်းအချပ်တွေဝယ်စုဆောင်းရတာတွေ ကိုယ်ရဲ ...
ၤFwd : လက္႐ွိကုမၸဏီမွာဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္လုပ္မွာလဲ ? ? ? ? ? အခန္း(၅) - သူေဌးထက္ေတာ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား...... ဒါနည္းနည္း ဆန္းသြားၿပီ။ ဒီေခါင္းစဥ္ကို ကၽြန္ေတာ္ရြတ္ေတာ့ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ေျပာတယ္။ ဟ သူေဌးထက္ေတာ္မွေတာ့ သူေဌးထက္ခ်မ္းသာေ...
Lovely Sister White Angle
ဂဏန္းငပိခ်က္ နဲ႕ တို႕စရာ... - ဒီဟင္းကေတာ့ မိုးေအးေအးပိတ္ရက္မွာ ရွဴးရွဴးရွဲရွဲေလး ခ်က္စားခ်င္သူေတြအတြက္ပါ... ပါ၀င္တာကေတာ့... ႏွစ္ေယာက္စာ.. (၁) ဂဏန္း အေကာင္ႀကီးရင္ ႏွစ္ေကာင္ (သို႕) ေသးရင္...
အိပ္မက္ေတြမွန္းငါသိပါတယ္ - နင့္ကမၻာကရႈပ္ေထြးလြန္းတယ္ ငါကတည္ျငိမ္လာသေလာက္ နင္ကလႈပ္ခတ္ႏိုင္လြန္းတယ္..... နင္အခ်ိန္မွန္ခစားခဲ့တဲ့ငါ့ညေတြ ေနေရာင္နဲ့ထိေတြတဲ့ျမဴနွင္းေတြလို ေပ်ာက္ရွ...
အေမွာင္မွ အလင္းသို႔ ျဖန္႔က်က္ျခင္း - စကၤာပူကၽြန္းေသးေသးတြင္ သြားစရာ လည္စရာ ဓာတ္ပံုရိုက္စရာ အေတာ္ရွားေသာေၾကာင့္ ျမင္ေနက် HDB တိုက္တန္းမ်ားကို တခါတေလ အျမင္တမ်ိဳးဆန္းဆန္းႏွင့္ ျမင္ၾကည့္ေသာ အခါ အေ...
My Blogs List Diary
Poem and News